musha > longtrainjourneys
Nguva yekuverenga: 8 maminitsi Kufunga kwava kure kwamazuva mashoma? Zvakadini nokuronga dzimwe nzendo zuva kufamba nechitima kubva Paris? French nezvitima muri kutsanya, nyore, uye eco-hushamwari nzira yekutenderera muFrance. With Save A Train, iwe unozokwanisa kubhuka mumaminetsi…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Rugare uye anakidze. Mazwi maviri ausingawanzo kunzwa vabereki vachishandisa kana vachitaura nyaya dzezororo rekufamba nevana. saka, tafunga kukupa akakosha matipi ekufamba nechitima nevana muEurope. Pane chimwe chinhu nezve zvitima izvo zvinonyaradza vana…